I-China ibhengeza ukuba ilahlekile kulawulo lwesitishi sayo kwaye iya kuwela eMhlabeni ngo-2017 | Iindaba zeGajethi
Kuyabonakala ukuba, njengoko bekubhengeziwe nje kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo ezivela e-China, emva kweenzame ezininzi zokuphinda zilawule isikhululo saso I-Tiangong-1Ekugqibeleni ndigqibe kwelokuba ndinikezele kwaye ndibhengeze ukuba, ngaxesha lithile ngo-2017 izakuwa emhlabeni eqinisekisa into ebeziqikelelwe ziingcali ezithile kwicandelo iinyanga ezininzi kwaye ayikho enye into ngaphandle kokuba i-China ilahlekelwe sisikhululo sayo sendawo.
Ngokwengxelo ebonelelwe yi-Chinese Space Agency ngalo mbandela, ekugqibeleni kuqinisekisiwe ukuba iTiangong-1 ingene kwinto eyaziwa njenge 'ukubola komjikelo'Ukuthetha ukuba isikhululo sendawo siyancipha ngokoqobo ukujikeleza kwaso ngokuthe ngcembe njengoko sitsalwa ngumxhuzulane woMhlaba. Inxalenye ephazamisayo yayo yonke le nto kukuba, ngelishwa, iyaziwa kuphela loo nto ngaxesha lithile ngo-2017 kufuneka iwele eMhlabeni nangona ayaziwa ukuba yayiphi okanye nini.
Nangona ingaqinisekiswanga, i-China ibonakala ngathi ilahlekile lonke ulawulo kwisitishi sendawo yayo.
Ukubuyela kwimbali yeTiangong-1, kufuneka sithethe ngeprojekthi eyayizakufakwa kwi-orbit ngo-2010 nangona, ngenxa yeengxaki ezahlukeneyo, ukumiselwa kwayo kwamiswa kwada kwamiswa kwada kwaba ngu-Septemba ka-2011. orbit kude kube ngo-2013 nangona ekugqibeleni ngaphezulu kokuphindwe kabini kulindelwe. Njengeenkcukacha, xelela ukuba ngo-2013 kwaye kulandela isicwangciso sokuqala bonke oosomajukujuku babezithiyile ukubuyela ekhaya, ukusukela ngoko isikhululo sendawo yaseTshayina sisahleli singasebenzi.
Njengoninzi lwezinto ezithunyelwa emajukujukwini, bakuba bewenzile umsebenzi wabo, benzelwe ukuba banciphise iindlela zabo ngendlela elawulwayo ukuze baqiniseke ukuba bawela embindini wolwandle okanye bachithakale emoyeni. . Le ayisiyiyo imeko yeTiangong-1 kuba i-China ayazi ukuba isikhululo sithuba sizongena nini kwiplanethi yethu akunakwenzeka ukuba uyazi indawo yefuthe elinokwenzeka.
Más información: Mechanics Popular
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » I-China ibhengeza ukuba ilahlekile kulawulo lwesikhululo sayo kwaye iya kuwela eMhlabeni ngo-2017
Izizathu ezisi-7 zokuthenga i-iPhone 7 ngaphandle kokucinga ngayo nayiphi na enye into